Weerar Askar Lagu Dilay oo Ka Dhacay Afar Irdoodka Boosaaso iyo Saldhigga Ciidanka Daraawiishta Af-Urur oo la duqeeyay.
Friday March 18, 2016 - 20:22:56 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya magaalada dekadda leh ee Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in weerar xooggan lagu qaaday bara koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Puntland.
Boosaaso waa magaalada Afaraad ee Soomaaliya ugu weyn
Caawa Fiidkii ayay ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar toos ah ku qaadeen Bar-koontarool oo ciidamada booliska maamulka Puntland ku lahaayeen halka loo yaqaan Afar Irdoodka ee bartamaha magaalada Boosaaso.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in laba askari oo katirsan ciidamada booliska lagu dilay weerarka iyadoona la maqlayay rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka sida ay baahisay idaacadda Andalus ee afka xarakada ku hadasha, Al Shabaab waxay sheegtay in weerarka Afar Idoodka Boosaaso ay ku dishay 2 askari islamarkaana ay qabsatay qori nuuca AK47 ah.
Dhinaca kale habeenkii 2-aad oo xiriir ah ayaa duqeyn culus loo geystay saldhig melleteri oo ciidamada Daraawiishta Puntland ku leeyihiin deegaanka Af-urur oo qiyaastii 50 KM ujira magaalada Boosaaso.
Xalay ayay sidaan oo kale xoogaga Shabaabul Mujaahidiin u duqeeyeen isku imaatinno ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka maamulka Cabdi Wali Gaas.
Weeraradan ka dhacay Boosaaso iyo duleedkeeda ayaa kusoo aadaya xilli dagaallo culus ay maalmihii lasoo dhaafay ka socdeen deegaanno katirsan gobolka Nugaal.